October 16, 2021 - Channel Lover
ညနေ့က မိုးကုတ်မြို့ တွင် မြင်တွေ့ရသော ထူးဆန်းသော အလင်းရောင်
October 16, 2021 by Channel Lover
ညနေ့က မိုးကုတ်မြို့ တွင် မြင်တွေ့ရသော ထူးဆန်းသော အလင်းရောင် ယနေ့ ၁၆. ၁၀. ၂၀၂၁ ခုနှစ် စနေနေ့ညနေပိုင်းအချိန်မှာ တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးတဲ့ ထူးဆန်းတဲ့အလင်းရောင်တစ်ခုကို ပြည်သူတွေ မြင်တွေ့ကြရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်…။ ဘာနိမိတ်တွေ… ညာနိမိတ်တွေပြတာလဲတော့ မသိဖူး …။ တစ်သက်နဲ့ တစ်ကိုယ် ဒီတစ်ခါပဲ မြင်ဖူးတာပါ…။ မြင်ရတွေ့ရတာတော့ တောင်ပေါ်မှာ အလင်းတန်းက အရမ်းကို လှပနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်…။ မြန်မာပြည်ကြီးအတွက် ကောင်းတဲ့နိမိတ်တွေပဲ ယူဆောင်လာပေးပါစေလို့ ဆိုတောင်းလိုက်ပါတယ်…။ photo credit unicode ညနကေ့ မိုးကုတျမွို့ တှငျ မွငျတှရေ့သော ထူးဆနျးသော အလငျးရောငျ ယနေ့ ၁၆. ၁၀. ၂၀၂၁ ခုနှဈ စနနေညေ့နပေိုငျးအခြိနျမှာ တဈခါမှ မမွငျဖူးတဲ့ ထူးဆနျးတဲ့အလငျးရောငျတဈခုကို ပွညျသူတှေ မွငျတှကွေ့ရတာပဲ … Read more
စစ်တပ်မြို့ဆိုပီး လှောင်ပြောင်နေတဲ့သူတွေကို အလုပ်နဲ့သက်သေပြလိုက်တဲ့ မြင်းမူလျှပ်စီး ပြောက်ကျားအဖွဲ့
မဟာမိတ်များပူးပေါင်းစစ်ဆင်ရေးကြေညာချက် (၇/၂၀၂၁) ရက်စွဲ။ ။ ၂၀၂၁ အောက်တိုဘာလ ၁၆ ရက် မြောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးအဖွဲ့-CDSOM ၊ Myaung Special People’s Defense Force – MSPDF ၊ နှလုံးလှလူမိုက်ကြီးများအဖွဲ့၊ 27 Revolution Forces ၊ PDF–Taloke ၊ မြင်းမူလျှပ်စီးပြောက်ကျားအဖွဲ၊ People Defense Force Yesagyo၊ စစ်ကိုင်း ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ (SGG)၊ Chaung U People’s Defense Force ၊ Monywa People Defence Force – MPDF ၊Black Eagle Defense Force (MMU) ၊ မြောင်မြို့နယ် T.G.R – ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် … Read more
အမေစုနဲ့ NLD ပါတီကို ပက်ပက်စက်စက်ပြောဆိုလိုက်တဲ့ မင်းအုပ်စိုး
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ လတ်တလော လူမူကွန်ယက်မှာ ပြန်လည်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တဲ့ မင်းအုပ်စိုး တစ်သက်တကျွန်း ထောင်ဒဏ်ကျခဲ့ပေမယ့် ပြန်လည်လွတ်မြောက် လာခဲ့သူပါ လတ်တလောမှာ အများနဲ့မတူတဲ့ အလုပ်တွေနဲ့ ဂိုဏ်းစတား ဆန်ဆန် တပည့်တပမ်းတွေနဲ့ လှုပ်ရှားနေသူအဖြစ် သတင်းတွေလည်း ထွက်ပေါ်နေခဲ့ပါတယ်။ ခုတစ်ခါမှာတော့ မင်းအုပ်စိုးက တကယ်မသိလို့မေးကြည့်တာပါကွာ ဆိုပြီး Facebookပေါ်မှာ ကြည့်လိုက်ရင် တပ်မတော်ကြီးကို မုန်းတီးကြတဲ့ ပျက်စီးစေချင်ကြတဲ့ သူတွေက တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ကို မအလ မင်းအောင်လှိုင်လို့ဆဲ ဆဲနေကြတာ အတော်များများ တွေ့နေရပါတယ် တကယ်ကို ကွဲကွဲပြားပြား မသိလို့မေးကြည့်မိတာပါ မင်းတို့တွေ တိုက်ပွဲဝင်နေကြတာက မြန်မာပြည်ကြီးမှာ ဒီမိုကရေစီစနစ် ပြန်လည်ထွန်းကားပေါ်ပေါက်လာဖို့လား ဒါမှမဟုတျ ကိုယျ့ထကျအသကျအရှယျ ကွီးသူတှကျေို မိုကျမိုကျရိုငျးရိုငျး ဆဲခှငျ့ရဖို့အတှကျလား ဒါက တစ်ချက်ပေါ့ကွာ နောက်တစ်ချက်ကဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ကိုပဲယုတ်ယုတ်မာမာတွေ ဆဲနေကြလေတော့ လက်ရှိနိုင်ငံရေး … Read more
ထိုင်းကနေပြန်မယ့် ပြည်တော်ပြန်များအတွက် အထူးသတိပေးချက်
ထိုင်းနယ်စပ်မြဝတီချစ်ကြည်ရေးတံတားမှ လက်ခံနေသော ပြည်တော်ပြန်များ မနက်ဖြန်မှစ၍ ယာယီပိတ်မယ်လို့ သိရ 16-10-2021 ရက်နေ့ကနေ 22-10-2021 ထိပိတ်မယ်လို့လည်း ပြောနေကြသလို ရက်အကန့်အသတ်မရှိ ပိတ်မယ်လို့လည်း သတင်းကြားရ…. ပြည်တော်ပြန်များနားစွင့်ပြီးမှ ပြန်ကြပါ…. နိုဝင်ဘာ (1)ရက်နေ့ မြဝတီချစ်ကြည်ရေးတံတားအမှတ်(1) တရားဖွင့်မယ်ဆိုပြီး MOU အေဂျင်စီပွဲစားတွေ ပြောနေတာ ဖွနေတာ သတင်းအမှားပါ…. မြဝတီမဲဆောက် တံတားနှစ်ခုလုံး လုံးဝ(လုံးဝ) တရားဝင် မဖွင့်သေးပါ။ လာမယ့် (20)ရက်နေ့ နယ်စပ်မှာ ထိုင်းမြန်မာအစည်းအဝေးတစ်ခုရှိတယ် လို့ သတင်းကြားရ…. တံတားဖွင့်မယ့် ဆိုပြီး ကောလဟလာလွှင့်ပြီး ငွေရှာဖို့ MOU အေဂျင်စီရုံးတွေ ပွဲစားရုံးတွေက ခြေရှုပ်နေကြပြီလို့ သတင်းပေးတစ်ဦးမှ AAC ထံ သတင်းပို့… သတင်းတွေကို သေချာလေ့လာပါ…. ဘယ်သတင်းဌာနက ဘယ်သူဘယ်ဝါကို ထိုင်းအေဂျင်စီတွေနဲ့ မြန်မာအေဂျင်စီတွေ ပွဲစားအကျိုးဆောင်တွေက … Read more
စစ်ကောင်စီနှင့် MNDAA တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန် လက်နက်ကြီးများပစ်ကူနေသည့် (ရုပ်သံ)
စစ်ကောင်စီနှင့် MNDAA တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန် လက်နက်ကြီးများပစ်ကူနေသည့် (ရုပ်သံ) ဖောင်းဆိုင်၊ ဆုတောင်းတောင်တွင် စစ်ကောင်စီနှင့် MNDAA တို့ တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေ၊ စစ်ကောင်စီ မုံးကိုးဗျူဟာမှ လက်နက်ကြီး ပစ်ကူနေ (ရုပ်/သံ) ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ မုံးကိုးမြို့နယ်၊ ဖောင်းဆိုင်ဒေသရှိ စစ်ကောင်စီတပ်စွဲထားသော ဆုတောင်းတောင်တွင် စစ်ကောင်စီတပ်နှင့် ကိုးကန့် MNDAA တပ်ဖွဲ့ကြား ယနေ့ မွန်းလွဲပိုင်း၌ တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီး စစ်ကောင်စီ မုံးကိုးဗျူဟာကုန်းမှတဆင့် ဖောင်းဆိုင်ဘက်သို့ လက်နက်ကြီး ပစ်ကူပေးနေကြောင်း ကချင်သတင်းရင်းမြစ်များထံမှ သိရသည်။ အဆိုပါ ဆုတောင်းတောင်ရှိ စစ်ကောင်စီစခန်းအား ကိုးကန့် MNDAA တပ်များမှ အောက်တိုဘာလ ၁၂ ရက် တွင် ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး နာရီဝက်ခန့် တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ကာ စစ်ကောင်စီတပ်များ၏ လက်နက်ကြီး လက်နက်ငယ်များဖြင့် ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ဒေသခံ ၄၀၀ ကျော် … Read more
ပုလဲ PPDF မှ ဗိုလ်နဂါးလက်စွမ်းပြ တဲ့ (ရုပ်သံ)
ပုလဲ PPDF မှ ဗိုလ်နဂါးလက်စွမ်းပြ (ရုပ်သံ) ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်…။ အောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက် နံနက် ၉ နာရီ မိနစ် ၄၀ ခန့်တွင် ပုလဲမြို့နယ် နဂါးမတောင်အနောက်ဘက် ဝမ်းပြင်ကျေးရွာအလွန်တွင် ရှေ့ပြေးလမ်းရှင်းအဖွဲ့အဖြစ် လက်နက်ကြီး လက်နက်ငယ်များ ပစ်ခတ်၍ တက်လာသော စစ်ကောင်စီတပ် ၃၀ ခန့်ကို ပုလဲပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ (PPDF) သိန်းငှက်လေး ဦးဆောင်သည့် တပ်စိတ်(၁)မှ ရဲဘော်၂၀ ဦးနှင့် မိုးကြိုး၊ ဖိုက်တာကြီး၊ နာဂစ်၊ ကျောင်းဆရာ၊ မုန်တိုင်းအမည်ရှိ ကွန်မန်ဒို ၅ ဦးတို့မှ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ပြီး တူမီးများဖြင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာ စစ်ကောင်စီတပ်သားများ အားလုံးနီးပါး အတုံးအရုန်း သေဆုံးခဲ့သည်။ နောက်မှကပ်ပါလာသော ယာဉ်တန်းက လက်နက်ကြီး လက်နက်ငယ်များနှင့် ဆက်လက်ပစ်ခတ်သဖြင့် … Read more
သူတစ်ယောက်ထဲ မုန့်လေးစားနေတဲ့ပုံ ခုထိဖုန်းထဲသိမ်းထားခဲ့တယ် သိပ်သနားမိလို့ပေါ့”
သူတစ်ယောက်ထဲ မုန့်လေးစားနေတဲ့ပုံ ခုထိဖုန်းထဲသိမ်းထားခဲ့တယ် သိပ်သနားမိလို့ပေါ့ ဆန္ဒပြထွက်တာတောင် အပေါင်းအသင်းမရှိရှာတဲ့ နယ်ကကလေး မပြည့်စုံလို့ရန်ကုန်မှာပညာရှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ရတဲ့ကလေး ရှေ့ဆုံးမှာ ဒိုင်းကိုင်ပြီးကာကွယ်ခဲ့သူ ကျည်မှန် ပြီး မျက်လုံးတစ်လုံးပေါက်ထွက်ကာကျဆုံးခဲ့တယ် ဟော..ခုတော့ မပြည့်စုံရှာတဲ့ ကျန်ရစ်သူမိဘညီကိုမောင်နှမတွေအတွက် ပြည်သူတွေဆောက်ပေးတဲ့အိမ်.. သူ ဒီလိုလေးနေခဲ့ချင်မလားပဲ ခု.. သူမြင်ရင် ပျော်မှာ အသက်နဲ့ယှဉ်လိုက်ရင်တော့ အိမ်တစ်လုံးဆိုတာ ဘာမှမဟုတ်ဘူးပေါ့ သူ့မိဘတွေကတော့ သူ့သားကိုပဲပြန်လိုချင်မှာ ဒါပေမယ့် ပြည်သူတွေရဲ့မေတ္တာကြောင့်တော့ အနည်းငယ် စိတ်ဖြေသာမှာပါ ကျဆုံးသွားတဲ့ သူရဲကောင်းတွေရေ မင်းတို့တွေ ပြန်မလာနိုင်တော့ဘူး ငါတို့ရင်ထဲလဲ နာကျင်မူ့တွေနဲ့ မမေ့နိုင်သေးဘူး.. နောက်ဘ၀မှာ ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးမျိုးနဲ့ဝေးပြီး ကောင်းရာဘုံဘဝမှာ ခံစားစံစား နိုင်ပါစေ မောင်လေးဇင်လင်းထက်ရေ.. သူတစ်ယောက္ထဲ မုန့်လေးစားနေတဲ့ပုံ ခုထိဖုန်းထဲသိမ်းထားခဲ့တယ် သိပ်သနားမိလို့ပေါ ဆန္ဒျပထြက္တာတောင် အေပါင်းအသင်းမရွိရွာတဲ့ နယ္ကကေလး မျပည့်စုံလို့ရန္ကုန္မွာပညာရွာအလုပ္လုပ္ခဲ့ရတဲ့ကေလး ရွေ့ဆုံးမွာ ဒိုင်းကိုင်ပြီးကာကြယ္ခဲ့သူ က်ည္မွန် … Read more
ကြည့်မြင်တိုင် ဖြစ်စဉ်တွင် ဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့ကြသည့် ဗိုလ်မှူးများ
ယနေ့ ကြည့်မြင်တိုင်ဖြစ်စဉ်မှာ သတင်းထောက်(၂)ဦးရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေ
တဈနိုငျငံလုံးပူဆှေးသောကရောကျနခြေိနျ နပွေညျတျောက စဈသညျဗိမာနျမှာ ဂါရဝပွုခဲ့နခေဲ့တဲ့ ရှရေူပါဦး
ယနေ့ည(၈)နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့အနှံ့အပြား မင်းအောင်လှိုင်ကို သံပြိုင်ဆဲဆိုနေကြသည့်(ရုပ်သံ)